Faahfaahin qaraxa ka dhacay Muqdisho & booliska oo ka hadlay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Faahfaahin qaraxa ka dhacay Muqdisho & booliska oo ka hadlay
Faahfaahin qaraxa ka dhacay Muqdisho & booliska oo ka hadlay
Qaraxa uu jugtiisa laga maqlay qaar kamid ah degmooyinka Gobolka Banaadir ee caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxaa uu ka dhacay inta u dhaxeysa Saldhiga Booliska degmada Xamarweyne iyo Goobta Ganacsiga ee City Mall.
“ Abaare 11:25 barqanimo ee maanta ayay Ciidanka Boliisku degmada Xamarweyne waxaa ay heleen xogta qof isku soo xiray walxaha Qarxa kaa oo doonaya inuu isku qarxiyo Ummadda, ilaahay mahadiis ma u dhicin sidii uu rabay oo ciidanka ayaa ceyrsaday ka dibna jaakadda ayuu iska tuuray oo qaraxday cid khasaare ka soo gaaray ma jirin ayuu yiri” Afhayeenka.
Xaaladda Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan waxaa ay kusoo noqotay mid caadi ah iyadoona Ciidanka Amniga ay Gacanta Ku Dhigay Ninkii Watay Qaraxa.
Waxaana haatan goobta ku sugan Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska degmada Xamarweyne ee Gobolka Banaadir.
Previous articleDHAGEYSO:4 qof oo ku dhimatay shil ka dhacay Tharaka Nithi
Next articleKenya oo ay ka dhacayso afti ka dib markii BBI laga ansaxiyay 28 ismaamul